गायिका शान्ति श्री परियारले गाएको बिबाधित तिज गित कसरी भयो रातारात भाइरल , १२ लाख भ्युज ( भिडियो ) - Onlines Time
गायिका शान्ति श्री परियारले गाएको बिबाधित तिज गित कसरी भयो रातारात भाइरल , १२ लाख भ्युज ( भिडियो )
August 19, 2021 onlinestimeLeaveaComment on गायिका शान्ति श्री परियारले गाएको बिबाधित तिज गित कसरी भयो रातारात भाइरल , १२ लाख भ्युज ( भिडियो )
तीन दिन अघि सार्वजनिक भएको शान्ती श्री परीयारको गीतलाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ ।
‘लाजले छोपेको- हेर्ने हो र देखाइदिम्’ बोलको गीतलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना सुरु भएको हो । उनको गीतले दोहोरो अर्थ दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आलोचना गरेका छन् ।
गायक दुर्गेश थापाले सार्वजनिक गरेको एक गीतका कारण दुर्गेशलाई लोकगीत प्रतिष्ठानले उनलाई कारवाहीको निर्णय गरेको थियो । साथै उनलाई विदेशमा हुने कार्यक्रममा सहभागी नगराउन र स्टेजजमा पनि निम्ता नदिन भन्दै प्रतिष्ठानले अनुरोध समेत गरेको थियो ।
दुर्गेशलाई गीतमा आपत्ती जनक शब्द प्रयोग गरेको भन्दै कारवाहीको निर्णय गर्ने प्रतिष्ठानले यस्तो दोहोरो अर्थ दिने गीत सार्वजनिक हुँदा नबोलेको भन्दै विरोध समेत गरिएको छ ।
१२ अगस्तमा सार्वजनिक भएको सो गीतमा राजु सुनामको शब्द तथा संगीत रहेको छ भने गायिका शान्तीश्री परियार र यज्ञ बिकको स्वरले स्वर दिएका छन्। सामाजिक परिवर्तनका गीत गाउने शान्तीश्रीले यस्तो गीत गाएको भन्दै उनको बढी आलोचना भएको छ ।
गीतको भिडियोमा पुष्प खड्का र जिशु कोइराला नाचेका छन् । नवराज उप्रेतीको छायांकन रहेको भिडियोमा मौसम हिमालको निर्देशन तथा कोरियोग्राफी रहेको छ।
दोहोरो अर्थ दिने खालको भएकाले टिकटकमा दोहोरो अर्थ दिने भिडियो पनि बनाइन थालिएको छ । नवीना थापा नामका एक प्रयोगकर्ताले भनेकी छिन्, दुर्गेशको गीत नराम्रो लाग्नेहरू यो गीत चाई राम्रो लाग्यो होला होइन दोहोरी प्रतिष्ठानलाई नि राम्रो लागेछ जे होस्।
त्यसैगरी अर्का प्रयोगकर्ताले गीतमाथि कुनै कारवाही नथालिएको आरोप लगाउँदै प्रतिष्ठानमाथि प्रश्न उठाएका छन्। ‘कता छ दोहोरी गीत प्रतिष्ठान ? के यो गीतका शब्द विवादास्पद छैन र ? गणेश बानियाँ नामका प्रयोगकर्ताले प्रश्न गरेका छन्।
तोपबहादुर खड्का नामका प्रयोगकर्तालाई भने शान्तिश्री परियारकै स्वरमा यस्तो शब्दको गीत आएकोमा लाज नै लागेछ। उनले भनेका छन्, ुशान्तिजीबाट यस्ता शब्दको व्यापार हुनु लज्जास्पद।’ ‘हेर्ने हो र देखाइदिम्’ गीतको शब्दमाथि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान कस्तो एक्सनमा उत्रिएला ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
भर्खरै प्र*चण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको यस्तो निर्णय, माधव नेपालसँग छुटेको २४ घण्टा नहुँदै यस्तो (भिडियो हेर्नुहोस्)